Heloka ny fanilihana ny zokiolona, hoy ny Papa François. Mizaka ny tsy eran'ny aina izy ireo noho ny fitiavan-tenan'ny fiaraha-monina ankehitriny. Katesizin'ny Papa François momba ny fianakaviana, miaraka amin'ny P. Justolat Rafaralahimboa.
Raha mitohy ny fanajana ny ray aman-dreny dia hivoatra ny fomba amam-panao ankehitriny, hoy ny Papa François. Harena sarobidy ho an'ny zanany ny zokiolona satria izy ireo no mampita ny fahendrena ho an'ny taranaka mifandimby. Manohy ny fandalinam-pinoana momba ny anjara-toeran'ny zokiolona ao amin'ny fianakaviana, araka ny fampianaran'ny Papa François i P. Justolat Rafaralahimboa.
Fianakaviana: voahilika ny zokiolona
Tsy manome anjara toerana ny zokiolona intsony ny kolo-tsaina ankehitriny. Mbola mandrafitra ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina anefa izy ireny. Asongadin'ny Papa François amin'ny katesizy momba ny fianakaviana izany. Tohin'ny fandalinana iarahana amin'ny P. Justolat Rafaralahimboa:
Ireo majy telo
Raha vao miteny ho “Epifania” na fisehoan’ny Tompo ao anatin’ny vanim-potoanan’ny Noely dia ireo Majy na ireo mpanjaka telo notarihin’ny kintana no tonga ao an-tsaina avy hatrany. Araka io voalaza teo aloha dia ny daty manodidina ny 06 Janoary no ahatsiarovana izany fotoana lehibe namangian’izy ireo an’ity zaza vao teraka ity izany.Arahantsika ny Katesizy miaraka amin'i P. Justolat E. Rafaralahimboa